646 miliara Ar sy 240 taonina samy very e - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Tao ho ao dia maromaro ireo vaovao tokony hahataitra navoakan’ny Banky Iraisam-pirenena momba ny toekaren’i Madagasikara. Sehatra roa no ndeha ho singanina etoana.
Nambaran’ny Banky Iraisam-pirenena fa nahatratra 646 miliara ariary ny vola natobaka tao amin’ny “kaonteran’i” Jirama nanomboka ny taona 2011 hatramin’ny faran’ny volana sepitambra. Raha tsinjaraina izany dia tahaka izao : ny 2011 hatramin’ny 2013 dia tafakatra 456 miliara ariary ny vola fanampiana (subvention) nomena ny Jirama. Ary tafakatra 190 miliara ariary izany nanomboka ny volana zanvie 2014 hatramin’ny volana sepitambra 2014.
Raha ireo tarehimarika ireo no hitafatafana dia nahatratra 152 miliara teo ho eo ny vola fanampiana nomena ny Jirama ny taona 2011 hatramin’ny 2013. Tao anatin’ny Tetezamita isika tamin’izany. Ary ny volana zanvie 2014 hatramin’ny sepitambra 2014 dia efa tafakatra 190 miliara ariary izany. Nihoarana izany ilay salan’isa hita nandritra ny Tetezamita rehefa tafiditra ao anatin’ny Repoblika “ara-dalana” ny firenena. Hafahafa izany. Mila tsy ampino. Manaitra. Nahay nifehy tena tokoa ve ny mpitondra ny Tetezamita ? Sa sanatria maika hamerina ny vola lany nandritra ny fampielezan-kevitra izay nahazo fahefana ? Marihina mantsy fa tsy niova ny mpitondra ny Jirama ny Filoham-pirenena lanim-bahoaka dia mahalala tsara ny kaontin’i Jirama satria fony izy minisitry ny vola dia tao anatin’ny Filankevi-pitantanan’i Jirama ny tenany. Tsaroana fa mba nampiaka-peo ihany ny Filoham-pirenena roa na telo volana izay fa misy fandaniana mampiahiahy ao. Nijanona ho tendrom-po na surtension fotsiny izany fa tsy hita izay vokatry ny fanadihadiana raha nisy ny fanadihadiana natao. Amin’ny tahaka izao tokoa no ilaina ny fisian’ny loharanom-baovao malalaka ary mangarahara eo amin’ny fitantanam-bolan’ny fanjakana. Raha mba vita isan-taona ny loi de règlement izany hoe ny lalàna momba ny fampiasana ny tetibolam-panjakana taona iray dia ho mora hita ireo tarehimarika avy amin’ny Banky Iraisam-pirenena ireo.
Niakatra hatrany izany ny vola fanampiana azon’i Jirama kanefa dia hiarahana mahita ny vokatra : “Jiro tapaka, rano tsy mandeha, fangatahana famandrihana vaovao (abonnement) tsy hahazoana valiny…”. Niaraka niakatra amin’ny vola fanampiana ny tanjaky ny delesitazy.
Manoloana ny tarehimarika tahaka izao avy amin’ny vahiny dia mitodika aty amin’ny mpahay toekarena malagasy ny saina. Nankaiza izy ireo ? Aiza ireo manam-pahaizana eo anivon’i Jirama ? Ny olom-pirenena Malagasy tsirairay ve ho afaka hanadihady izay any anaty kaontim-bolan’i Jirama any ? Ny ao anatin’ny fakitiorany aza raha sendra mba mangata-panazavana rehefa midangana tampoka iny valiteny feno avona no mba setriny mainka fa izay any lavitra any. “Na hitomany ao anaty haizina ao aza ianareo tsy hahazo fanazavana” toa izay valim-boraingona izay tokoa no sahaza e.
Ny sehatra faharoa singanina dia ny momba ny fanondranana volamena. “Tombanana ho 240 taonina ny volamena naondrana antsokosoko any ivelan’i Madagasikara” hoy ny manam-pahaizana eo anivon’i Banky Iraisampirenena. Mba niandry ny fampiakaram-peo avy amin’ny mpiaro ny sisintany ihany fa tsy nandrenesam-peo ry zareo. Fa karazana fanompana an’ireo mpiaro ny sisin-tany tokoa ny famoahana tarehimarika tahaka izao. Fantatsika ny vidin’ny graman’ny volamena. Raha tombanana ho 40 000 ariary ny grama dia mitentina any amin’ny miliara ariary maro any koa izany ny harena nivoaka ny sisintany. Vola very. Ny haba tsy niditra. Rehefa mahita manam-pahaizana manome tarehimarika tahaka izao izay vao mahatsapa ny dikan’ireny mpijirika volamena eny amin’ny sisin’arabe ao Analakely ao, izay vao mahatsapa ny tena dikan’ireo mpanao volamena tantanan’ny karana marobe manerana ny Nosy ireo. Tsy hita firy ny asan’izy ireo kanefa tsy mikatona ireo mpanao volamena ireo. Ny Malagasy koa amin’io tsy hoe mitombo ny mitondra volamena fa toa volamena “10 carats” aza no mba eny amin’ny raha tsy varahina mihitsy aza no mba hisalorany.
Tratry ny masobe tsy mahita na ny mpanamarim-pitantanana eo anivon’i Jirama na ireo mpiaro ny sisintany. Voalaza fa mety higadra mandrapahafaty ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa niditra antsokosoko ary mba inona no sazin’ny olona namela ny harena hivoaka antsokosoko ? Ary ny an’ireo mpamoaka ? Fantatra anie izy ireo e. Efa antaonany amperinasa izy ireo.
Izay indray ary ny tafatafa amin’izao talata 4 novambra izao fa samia tsara indray e.